JingOS inopfekedza hwendefa rako neApple iPadOS mhando sutu | Linux Vakapindwa muropa
Muna Mbudzi isu takanyora chinyorwa chekuti maratidziro enzvimbo dzeLinux-based mobile operating system anga achifambira mberi. Ivo vane mwenje yavo nemimvuri yavo, asi chokwadi ndechekuti, mumaonero angu uye sezvandinogara ndichitaura, kana ivo vagadziri vakasakanda mapfumo pasi, ramangwana riri kuvimbisa. Kana izvo zviripo zvaive zvisina kukwana, nguva pfupi yadarika akapa chirongwa chekushandisa icho, pakutanga, chichava chakanakisa kutaura kutaura uye zita rine JingOS.
Asi kana iwe uine PineTab, dzikama. Vagadziri veiyi sisitimu inoshanda, zvirinani izvozvi, vakatarisa pane chimwe chinhu chemakomputa anoshandurwa, ndiko kuti, iwo anobva piritsi kuenda kuPc kana tikabvisa kana kuwedzera iyo keyboard. Hongu, iyo PineTab zvakare ine iyi sarudzo, asi panguva ino inongotsigirwa neSurface Pro 6 uye iyo Huawei Matebook 14 pamwe nekubata skrini. Iye CEO weJingling Tech anoti inogona kushandiswa pane akawanda maX86 maPC, asi kuti hatizokwanisi kunakidzwa nerakanakisa ruzivo pasina touch screen.
1 JDE senge graphical nharaunda
2 JingOS inogona kuyedzwa pakupera kwaNdira
JDE senge graphical nharaunda
Mune iyo yepamutemo peji reiyo projekiti isu tinogona kuona zvishoma kuti iyo interface yeanoshanda system yakaita sei. Haisi chaiyo kune iyo iPad, asi inotaridzika senge, neiyo Control Center kurudyi iyo, kana vakatiudza kuti inobva kuIOS 15, tinenge tichitenda izvozvo. Iyo kufungidzira kuti isu takatarisana nePados tinoitora, pamusoro pezvose, nedoko pazasi uye kugoverwa kwezvishandiso pachiratidziri chikuru.
Kufanana nemamwe masisitimu anoshanda, JingOS ine zvemuno zvinoshandiswa, senge khalendari, timer, maneja wefaira, media player, uye Calculator. Zvinotonyanya kuitika kuti izvi zvinotiziva zvishoma, asi nehurongwa hwekushanda zvakare inokwanisa kumhanya desktop desktop. Uye zvakare, iyo yakagadzirirwa kubata masikirini anotibvumidza kushandisa manongedzo pachiratidziri, senge minwe mitatu kuruboshwe kana kurudyi kuchinjika kubva kune imwe app uchienda pane imwe (ini ndakazviona kupi?).
Iyo graphical nharaunda yatinoona yakabhabhatidzwa seJDE, inova Jing Desktop Nharaunda, uye ini ndinofungidzira kuti vakave vakavakirwa pazita reprojekiti kubva kwavanokwereta software. Uye ndeyekuti JingOS inoshandisa KDE 5.75 uye Plasma Mobile 5.20, zvese zviri pamusoro peiyo Ubuntu 20.04 iyo yakatangwa muna Kubvumbi 2020. Tinokuyeuchidza kuti 20.04 Focal Fossa iri vhezheni yeLTS iyo inotsigirwa kusvika 2025.
JingOS inogona kuyedzwa pakupera kwaNdira
Chii? Chii chaunoda uye ungade kuchizama here? Ndine urombo. Chavachatangisa chichava JingOS v0.6, asi ichagara musi waNdira 31 kana pasina kunonoka. Zvichava panguva iyoyo apo vashandisi veSurface Pro 6 uye neHuawei Matebok 14 vachakwanisa kuwana zvakawanda kubva mazviri, nepo vamwe vedu tichigona kuzviyedza, kana ikasapa chero kukundikana, neimwe nzira seGNOME Mabhokisi / Virtualbox kana kubva pendrive. Kana iwe uchinzwa kushinga, iwe unogona pamwe kuiisa zvakare, asi isu hatikurudzire.
Tichakamirira, chinhu chakanakisa chatingaite kutarisa vhidhiyo-yekutarisa iyo yavakaburitsa paYouTube.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » JingOS inopfekedza yako inoshandurwa neiyo iPadOS sutu inovhara muviri waUbuntu
Linus Torvalds inopomera Intel nekushomeka kwekutorwa kwakawanda kwe RAM ECC